version 0.7.2 – တတိယကြွလာ၏
မတ်လ 1, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 11 comments
ကျွန်တော့် version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ 0.7.2 အနည်းငယ် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့် plugin ကိုမှသုံး Added ဘာသာပြန်ချက်များကိုနှင့်အတူ.
က Marco Rossi အားဖြင့်အီတလီဘာသာပြန်ချက်
အားဖြင့်ရှန်းဘာသာပြန်ချက် Sushyant Zavarzadeh
အားဖြင့်စပိန်ဘာသာပြန်ချက် ကောင်းကင်တမန်က Torregrosa
နှစ်နှစ် (နဲ့တစ်နေ့တာ) နောက်ပိုင်းအောင်မြင်ပြီး ဗားရှင်း 0.0.1 ပြန်လွတ်လာခဲ့သည် တစ်နှစ်ကတည်းက ဗားရှင်း 0.4.3 ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်. ယခုနှစ်အတွင်းမှာကျနော်တို့ကျော်ရှိခဲ့ 32,000 နှိုင်းယှဉ် downloads, 13,000 ရှေ့တော်၌ထိုတစ်နှစ်အတွက်, နှင့်ငါတို့သည် သာ. features နဲ့နည်းနည်းပိုတက်ကြီးပွားသည်ထုတ်ကုန်ရှိသည်.
ကျနော်တို့ proxy service ကိုများလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူဤနေ့ကိုဆင်နွဲဖို့အလိုရှိနေတဲ့, သို့သော်ကံမကောင်းစွာဤတစ်နည်းနည်းနှောင့်နှေးကြလိမ့်မည်, သို့သော် – ပူဇော်သောသိုးထီးတကောင်ကို 24GB server ကိုနောက်ဆုံးမှာတက်ဖြစ် (ဒီ site ကို hosting) ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီအဆက်မပြတ်မြည်ဟည်းသံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်. သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေမျှော်လင့်, အကြံပြုချက်များ, ကြင်နာသောစကားများနှင့်သင့်ကိုငါတို့နှင့်ပစ်ခြင်းငှါလိုလိမ့်မည်ဘာမှမ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: မှေးနေ့, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin